မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): မြန်မာပြည်မှာ စားသုံးနေကြတဲ့ ချက်နည်းပြုနည်း အစုံအကုန် 263 မျိုး
မြန်မာပြည်မှာ စားသုံးနေကြတဲ့ ချက်နည်းပြုနည်း အစုံအကုန် 263 မျိုး
(၁) ခ၀ဲသီးကြော်ချက် .........
(၂) သာမညအလွမ်းပြေ ဟင်းလေးများ ......
(၃) ခရမ်းချဉ်သီးပန်ထွေဖျော် ...................
(၄) သက်သတ်လွတ်မှိုကြော် ....................
(၅) သက်သတ်လွတ်ပဲပြားသုပ် ...........
(၆) သက်သတ်လွတ် ပဲပြားဟင်း .........
(၇) သက်သတ်လွတ်မုန့်ဟင်းခါး .........
(၈) ဟင်းနုနယ်ဆူးပုပ်ကြော် ........
(၉) ပုစွန်ကင် မွှေးမွှေးလေး .................
(၁၀) ငါးကင်မွှေးမွှေးလေး ........
(၁၁) ဆားဘဲဥ လုပ်ကြရအောင် ...........
(၁၂) ဒိန်ချဉ်ပြုလုပ်နည်း .........
(၁၃) ငါးပိရည်ကျိုနဲ့ တို့စရာ .....
(၁၄) ပုစွန်ချဉ် တည်နည်း ......
(၁၅) မျှစ်ချဉ် တည်နည်း ၊ ငါးနှင့်မျှစ်ချဉ်ဟင်းချက်နည်း .......
(၁၆) ၀က်သားချဉ်လုပ်နည်း ................
(၁၇) ငါးပိကောင်ကြော် ...........................
(၁၈) ရှမ်းချဉ် (သို့မဟုတ်) မုန်ညင်းချဉ် .......
(၁၉) ရာသီပေါ်သီးနှံများ ကြာရှည်ခံအောင် ...
(၂၀) စားတော်ပဲပြုတ် ..................
(၂၁) ကင်မ်ချီ (Kimchi) ...............................
(၂၂) ချဉ်ပေါင်ရွက်ခြောက်ချက်နည်း .................
(၂၃) ကျွန်မနှင့် ကြက်သွန်ဖြူနီဆီချက်ကြော် ........
(၂၄) လက်ဖက်သုပ်လုပ်နည်း ..................
(၂၅) ပင်လယ်စာအခေါ်အဝေါ် .............
(၂၆) အခေါ်အဝေါ်များ ....................
(၂၇) ဆင်ခေါင်းပဲ ပုံ + အခေါ်အဝေါ် ....
(၂၈) သာကူ ပုံ+အခေါ်အဝေါ် ....................
(၂၉) မုန့်ဟင်းခါးဖတ် ပုံ+အခေါ်အဝေါ် .......
(၃၀) ပဲကြော်မွမွလေး .................
(၃၁) ရေစိမ်မုန့်ဟင်းခါးဖတ် .....
(၃၂) ကြာဆံသုပ် ..............................
(၃၃) စားတော်ပဲပြုတ်သုပ် .................
(၃၄) ပုန်းရည်ကြီးသုပ် .......................
(၃၅) ကြက်သားသုပ် .....................
(၃၆) ငါးနီတူသုပ် ...........................
(၃၇) ပြောင်းဖူးပြုတ်သုပ် ..................
(၃၈) ငါးဖယ်ချဉ်သုပ် ......................
(၃၉) ချင်းသုပ် .............................
(၄၀) မယ်ဇလီဖူးသုပ်. .................
(၄၁) ဗယာကြော်သုပ် ...................
(၄၂) ငှက်ပျောဖူးသုပ် ....................
(၄၃) ကျောက်ပွင့်သုပ်၊ ဘူးသီးဟင်းခါး၊ ချောကလက်ကျောက်ကျော .
(၄၄) မုန်လာဥသုပ် ..............
(၄၅) ပဲကြာဆံသုပ် (၁) ..........
(၄၆) ပဲကြာဆံသုပ် (၂) .........
(၄၇) ၀က်အချင်းသုပ် ...........
(၄၈) ကြက်သားချဉ်စပ်သုပ် ...........
(၄၉) ကြက်သားကျောက်ပွင့်သုပ် .....
(၅၀) ကြက် အရေပြား အရိုးသုပ် ...........
(၅၁) ခရုသုပ် .......................
(၅၂) ပုစွန်ချဉ်သုပ်နဲ့ ပိန်းဥဟင်းခါး ........
(၅၃) ငါးဖယ်သုပ် .........................
(၅၄) ငါးနီတူမန်ကျည်းသီးစိမ်းသုပ် ...
(၅၅) ငါးဖယ်လုံးအစာသွပ် ..............
(၅၆) ငါးသေတ္တာသုပ် ......................
(၅၇) ကန်စွန်းပြည်ကြီးငါးသုပ် ...........
(၅၈) ဆေးဘဲဥသုပ် ...............................
(၅၉) ပြည်ကြီးငါးကျောက်ပွင့်သုပ် ...........
(၆၀) ဟင်းနုနယ်ရွက်သုပ် .....................
(၆၁) ကန်စွန်းရွက်သုပ် ...................
(၆၂) ခရမ်းသီးမီးဖုတ်သုပ် ............
(၆၃) သင်္ဘောသီးသုပ် (မွန်သုပ်) ......
(၆၄) သခွားသီးရှူးရှဲသုပ် ........................
(၆၅) သခွားသီးသုပ် (မော်လမြိုင်စတိုင်) .....
(၆၆) ကြက်ဟင်းခါးသီးသုပ် ........
(၆၇) ၀ဥသုပ် (တောသုပ်) ...........
(၆၈) မရမ်းသီးသုပ် ....................
(၆၉) ရှောက်သီးသုပ် ................
(၇၀) မုန်လာဥပိုးတီသုပ် ........
(၇၁) ထမင်းသုပ် .....................
(၇၂) တို့ဟူးသုပ် ...............................
(၇၃) လူတိုင်းစွဲမက် မြန်မာ့လက်ဖက် ............
(၇၄) နန်းကြီးသုပ် ...............................
(၇၅) နန်းပြားသုပ်နဲ့ ကြက်ရိုးတို့ဟူး (ပဲပြား)ဟင်းခါး ......
(၇၆) အစုံသုပ် ............................
(၇၇) ကြာဆံကြော်သုပ် .....................
(၇၈) ထိုင်းပုစွန်ကြာဆံသုပ် ..................
(၇၉) မျှစ်သုပ် ...................................
(၈၀) မှိုထမင်းသုပ် .............................
(၈၁) စိမ်းပြာခရု (သို့မဟုတ်) မရွတ်ရခိုင်သုပ် ....
(၈၂) အသွင်ပြောင်းအသုပ်နှင့် ဒန့်သလွန်ရွက်ဟင်းခါး ...
(၈၃) ပြည်ကြီးငါးကျောက်ပွင့်ရခိုင်သုပ်နှင့် မြင်းခွာရွက်ဟင်းခါး ..
(၈၄) ကြောင်လျှာသီးသုပ် ...
(၈၅) သနပ်စုံ .........................
(၈၆) ငါးခရမ်းကဆော့သီးအစပ်ချက် ..............
(၈၇) ကြက်သားဆီပြန် (မွန်ချက်) ............
(၈၈) ဘဲဥအငန်ချက် ........................
(၈၉) ဘဲဥငါးခြောက်ဟင်း ..................
(၉၀) နွားနို့ခဲချက် .............................
(၉၁) အမဲသားမျှစ်ချဉ်ဟင်း ....................
(၉၂) ငါးခြောက်ခရမ်းချဉ်သီးချက် ၊ ရခိုင်ငါးပိထောင်းနဲ့ ဘူးညွန့်ပြုတ် ...
(၉၃) ငါးပိကောင်ကြက်ပေါင်သီးချက် ..........
(၉၄) ဘဲတညင်းချက် ..................
(၉၅) ဘဲပေါင်း .........................................
(၉၆) ပိန္နဲသီးကြက်ရိုးဟင်း ..................
(၉၇) ကြက်သားကုလားပဲဟင်း ..........
(၉၈) ကြက်ခြေထောက်ပေါင်း ...............
(၉၉) ၀က်နားရွက်သုပ်၊ ၀က်ခြေထောက်နဲ့ ခေါက်ဆွဲပြုတ် .
(၁၀၀) အာလူးကြက်သားဟင်း၊ ပဲပုပ်ထောင်း၊ မှိုဟင်းချို ....
(၁၀၁) ကြက်သားအာလူးအုန်းနို့ချက် ....
(၁၀၂) ကြက်သားကာလသားချက် ........
(၁၀၃) ကြက်သားမဆလာချက် .............
(၁၀၄) ကြက်ရိုးကြက်အူ မျှစ်ချဉ်ဟင်း .....
(၁၀၅) ၀က်ပုန်းရည် ...............................
(၁၀၆) ၀က်သားနှပ် .............................
(၁၀၇) ၀က်သားသရက်သီးသနပ် .............
(၁၀၈) ကျွန်မ၊ ၀က်ကလီစာဟင်းနှင့် ရှောက်သီးသုပ် .......
(၁၀၉) ၀က်သားအချိုချက် ..........
(၁၁၀) ဆိတ်သားဟင်း .................
(၁၁၁) ဆိတ်သားအချဉ်ချက် ......
(၁၁၂) ဆိတ်ကလီစာချက် + ပဲဝါလေးဆူးပုပ်ဟင်းချို + ပဲစောင်းလျားသီးသုပ်
(၁၁၃) ပုစွန်ထုပ်ကြော် ........
(၁၁၄) ပုစွန်တုံယမ်းဆီပြန်ဟင်း ...
(၁၁၅) ပုစွန်ချဉ်စပ်ဟင်း ...........
(၁၁၆) ပုစွန်ပိန်းဥဟင်း .......
(၁၁၇) ငါးသလဲထိုးဆီပြန် ............
(၁၁၈) ငါးသလောက်အချဉ်ပေါင်း ......
(၁၁၉) ငါးသလောက် ချဉ်စပ်ချက် .....
(၁၂၀) ငါးအရိုးနူးပေါင်း .........
(၁၂၁) ငါးဖယ်လုံး အစပ်ချက် ..........
(၁၂၂) ငါးမြွေထိုးအချဉ်ရည်ဟင်း ........
(၁၂၃) ငါးဂျူးမြစ်သရက်သီးချက် ......
(၁၂၅) ခေါင်းတစ်ရာသားအိုးကပ် .......
(၁၂၆) ငါးခူသံပရာရည်ဆမ်းအစပ်ချက် .....
(၁၂၇) ငါးပုဏ္ဏားဆော်ဆီ ..........
(၁၂၈) ငါးဖယ်ကပတ် .....................
(၁၂၉) ငါးဖောင်ရိုးဟင်း ...............
(၁၃၀) အမဲခရမ်းနှပ် ...................
(၁၃၁) အမဲနှပ် ............................
(၁၃၂) ဒီနေ့ထမင်းဝိုင်း ..................
(၁၃၃) အာလူးငါးခြောက်အချဉ်ဆီပြန်ဟင်း .......
(၁၃၄) ပုစွန်အချိုကြော် ........
(၁၃၅) ငါးဥဟင်း ..........................
(၁၃၆) ငါးချဉ်ငန်စပ် အကြွပ်ကြော် .........
(၁၃၇) ချဉ်ပေါင်ဟင်းအစပ်ချက်+ ငါးဖယ်ဆုပ်ကြော်ချက် + ငါးနှပ်ခြောက်မီးဖုတ်
(၁၃၈) ပြည်ကြီးငါး ငါးပိချက် .............
(၁၃၉) ဂွေးသီးငါးပိချက် ..................
(၁၄၀) ဇရစ်ရိုး ဆူးပုပ်ကြော် .............
(၁၄၁) ခရမ်းသီးမီးဖုတ်ကြော် ..............
(၁၄၂) တရုတ်ပဲငါးပိကြော် ....................
(၁၄၃) ငါးနီတူခြောက် ငါးပိချက် .............
(၁၄၄) ကြွက်ကြော် မွှေးမွှေးလေး .....
(၁၄၅) ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်ကြော် ..........
(၁၄၆) ကြက်ဟင်းခါးသီး အစာသိပ် .........
(၁၄၇) ခ၀ဲသီး ငရုတ်ပွကြော် ............
(၁၄၈) ခရမ်းသီးနှပ် ...........
(၁၄၉) ငံပြာရည်ချက် ..........
(၁၅၀) ခရမ်းချဉ်သီး ငါးပိချက် .......
(၁၅၁) ဂျူးဖူးကြော် ...................
(၁၅၃) ချဉ်ပေါင်ကြော် .........
(၁၅၄) မရမ်းသီးထောင်း ....
(၁၅၅) အစိမ်းကြော် ..............
(၁၅၆) မျှစ်ကြက်ဟင်းခါးသီးကြော် ....
(၁၅၇) မှိုကန်စွန်းကြော် .............
(၁၅၈) ရုံးပတီသီးကြော် ............
(၁၅၉) မှိုငရုတ်ပွကြော် ..............
(၁၆၀) ကဏန်းသားသီးစုံကြော် ......
(၁၆၁) ငါးပိကြော်နည်း .............
(၁၆၂) ငါးဆော်ဆီ ..............
(၁၆၃) ချိုချဉ်ကြော် .........
(၁၆၄) ကြက်ချိုချဉ်ကြော် ..........
(၁၆၅) ၀က်သားကုန်းဘောင်ကြီးကြော် ....
(၁၆၆) ငါးရှဉ့်ခြောက်စပ်ကြော် ......
(၁၆၇) မျှစ်စားတော်ပဲပြုတ်ကြော် .....
(၁၆၈) အုန်းထမင်း ........................
(၁၆၉) မာလာဟင်း ........................
(၁၇၀) ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ ............
(၁၇၁) ရွှေမြိုင်မုန့်ဟင်းခါး ...............
(၁၇၂) ကြက်ပတေ ...................
(၁၇၃) ကြက်ဆီထမင်း ............
(၁၇၄) ငါးရံ့ဆန်ပြုတ် ................
(၁၇၅) ၀က်သားပေါင်း .............
(၁၇၆) ဖက်ထုပ်ပြုတ် ..................
(၁၇၇) ထောပတ်ထမင်း ..............
(၁၇၈) ထမနဲ ........................
(၁၇၉) သင်္ကြန်ထမင်း ...............
(၁၈၀) ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ................
(၁၈၁) မြီးရှည် ...................
(၁၈၂) ခေါပုတ် .............
(၁၈၃) ကြေးအိုး ...............
(၁၈၄) ကော်ရည် ................
(၁၈၅) ရှမ်းထမင်းချဉ် .........
(၁၈၆) ရှမ်းခေါက်ဆွဲသုပ် .......
(၁၈၇) ထိုင်းကော်ပြန့် ............
(၁၈၈) အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ .........
(၁၈၉) နို့စိမ်းခေါက်ဆွဲ .......
(၁၉၀) ရခိုင်မုန့်တီ ...............
(၁၉၁) မုန့်ဟင်းခါး ................
(၁၉၂) ဒံပေါက် ....................
(၁၉၃) ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ ....
(၁၉၄) တူယှဉ်ဆင်နွှဲ ရာပြည့်ဟင်းပွဲ (၀က်သားတုတ်ထိုး)
(၁၉၅) ပြည်ကြီးငါးကောက်ညှင်းအဆာသွပ် .....
(၁၉၆) စမူဆာ ............
(၁၉၇) ပုစွန်ခွက်ကြော် ......
(၁၉၈) ပုစွန်တန်ပူရာ ...........
(၁၉၉) ဘူးသီးကြော် ................
(၂၀၀) ဗယာကြော် .................
(၂၀၁) အာလူးကတ်သလိပ် .........
(၂၀၂) ကော်ပြန့် ......................
(၂၀၃) ခေါက်ဆွဲကြော် ................
(၂၀၄) ကြာဆံကြော် ...................
(၂၀၅) ကြာဆံပြားကြော် ...........
(၂၀၆) ထမင်းကြော် ................
(၂၀၇) ကတ်ကြေးကိုက် .............
(၂၀၈) ၀က်သားလိပ် ................
(၂၀၉) ပုစွန်အာလူးကြော် ........
(၂၁၀) ပဲပြား အစာသိပ် ..............
(၂၁၁) ဆန်စေး အရည်ဖျော် ...............
(၂၁၂) ရှမ်းခေါက်ဆွဲ အရည်ဖျော် .......
(၂၁၃) မြီးရှည် အရည်ဖျော် ..........................
ဟင်းချို၊ ဟင်းခါး၊ ချဉ်ရည်ဟင်း
(၂၁၅) ငါးခေါင်းဟင်းချို (မွန်ချက်) ........
(၂၁၆) ဘူးသီးပုတတ်စာဟင်းခါး .........
(၂၁၇) ဒန့်သလွန်သီး ငါးရံ့ဟင်း ..........
(၂၁၈) ပဲကြီးဆူးပုပ် .................................
(၂၁၉) ဂေါ်ဖီဟင်းခါး ...............................
(၂၂၀) ကင်ပွန်းချဉ် ပုတတ်စာ .....................
(၂၂၁) ချဉ်ပေါင်ဟင်း နှင့် ငါးကျည်းကြော် ........
(၂၂၂) ကြက်ရိုးခွေးတောက်ရွက်ဟင်းချို .......
(၂၂၃) သီးစုံဟင်းရည် .............................
(၂၂၄) ပဲကုလားဟင်း ............................
(၂၂၅) ပိန်းဥဟင်းခါး နှင့်ပုစွန်ချဉ်သုပ် ....
(၂၂၆) မဲဇလီဟင်းချို ................................
(၂၂၇) ပိန်းရိုးဟင်း ...........................
(၂၂၈) ကြာဆံချက် ..........................
(၂၂၉) ငါးနှပ်မရမ်း ............................
(၂၃၀) ပုစွန်ခ၀ဲသီး ကြာဆံဟင်း ............
(၂၃၁) တို့ဟူးဝက်သားဆန်ပြုတ် ....
(၂၃၂) ၀က်လက်စွပ်ပြုတ် .............
(၂၃၃) တုံ့ယမ်းစွပ် ..................
(၂၃၄) တို့ဟူးစွပ် ..................
(၂၃၅) သာခွေယိုင် ......................................
(၂၃၆) ပြိုင်ပွဲဝင် ရွှေရင်အေး ..........................
(၂၃၇) ရွှေရင်အေး .........................................
(၂၃၈) မေတ္တာရေလှိုင်း ကျောက်ကျော ........
(၂၃၉) ချောကလက်ကျောက်ကျော ..........
(၂၄၀) ကန်ဇွန်းဥဆနွင်းမကင်း ................
(၂၄၁) မာလကာသီး ......................
(၂၄၂) ကောက်ညှင်းကင် .................
(၂၄၃) ပေါင်မုန့်ပူတင်းပေါင်း .............
(၂၄၄) မုန့်လက်ကောက် ......................
(၂၄၅) ပူတင်းကော်ဖီကျောက်ကျော .......
(၂၄၆) မုန့်သိုင်းခြုံ ......................................
(၂၄၇) ကောက်ညှင်းပြန်ပေါင်း ပုစွန်ထောင်း .
(၂၄၈) နို့စတော်ဘယ်ရီ ကျောက်ကျော .......
(၂၄၉) မုန့်စိမ်းပေါင်း .........................
(၂၅၀) ကော်ပြန့်စိမ်း .........................
(၂၅၁) နို့ကီဝီကျောက်ကျော .............
(၂၅၂) အုန်းစိမ်းကျောက်ကျော .........
(၂၅၃) အော်ကွေ့ကြည် .......................
(၂၅၄) မုန့်ပိန္နဲစေ့ ..............................
(၂၅၅) ပြည်မလိုင်လုံး ......................
(၂၅၆) ငှက်ပျောပေါင်း ....................
(၂၅၇) မုန့်လုံးရေပေါ် .....................
(၂၅၈) ကောက်ညှင်းထုပ် .............
(၂၅၉) မုန့်ဗိုင်းတောင့် .................
(၂၆၀) မုန့်ပစ်သလက် . ..............
(၂၆၁) အုန်းနို့သာကူကျို ..........
(၂၆၂) တကိုရကိ (Takoyaki) ဂျပန်မုန့်လင်မယား .
(၂၆၃) သီးစုံကျောက်ကျော .......
Download - ချက်နည်းပြုနည်း 263 မျိုး ( lulucoocking)
Author Anonymous at 10:50:00 PM